Iyi inogona kunge iri iyo yakadhura iPhone SE iyo Apple yaizounza iyi 2018 | IPhone nhau
Iyi inogona kunge iri iyo yakaderera-mutengo iPhone SE iyo Apple yaizounza iyi 2018
Mushure meKeynote yeWWDC 2018 anotamba a chirimo chemakuhwa, runyerekupe rwekuti michina inotevera ichaunzwa sei neApple kumusika. Uye ndezvekuti mushure mezhizha inguva yekuti chirevo chekuburitsa iyo nyowani iPhone, uye zvinoita sekunge gore rino tichava nekuvandudzwa kwenhengo yekare yemhuri ye iPhone: iyo iPhone SE.
Zvakanaka, zvinoita sekunge zvirongwa zveApple zviri kuenderera mberi nekumisikidzwa kweiyo nyowani iPhone SE, iyo yakachipa-inodhura iPhone kubva kune vakomana pane iyo block. Iyo iPhone iyo, sekutaura kwedu, inouya kutora chinodikanwa chekuve ne iPhone pamutengo uri pasi pe1000 euros, mutengo unorambidzwa wevakafa vazhinji. Iyo runyerekupe Ivo vanodzokera kumutoro uye zvinoita sekunge tiri kuswedera pedyo nekuona kuti iyi itsva iPhone SE ingave sei. Mushure mekusvetuka tinokupa zvese izvo inogoneka iPhone SE, iyo yakachipa-mutengo inotsiva inotevera iPhone XI uye iPhone XI Plus ...
Sezvauri kuona mumifananidzo miviri yapfuura, tinenge takatarisana ne iPhone yakafanana neiyo inotevera iPhone XI (kana iPhone 11) kunze kwekunge panguva ino tichava ne 6.1 inch modhi, chimwe chinhu chichagadzira pachena dzikisa runyerekupe runopfuura ma1000 euros izvo zvinoda mari inotevera Apple mureza. Runyerekupe rwunoita kunge rwunosimbiswa kubvira sekutaura kwevakomana veBGR, isu takatarisana Dzosera mifananidzo inotumirwa kune vagadziri kuti vatange kugadzira izvo zvinotevera yePhones nyowani.
Iyo iPhone SE iyo inovimbisa kuve yepamusoro kutengesa kunyanya uchifunga nezve mutengo iyo inonyanya kukosha iPhones inogona kuburitsa (zvakare uchifunga nezvekuti isu tichaona zvechokwadi yakasarudzika iPhone Plus ine inorambidza mutengo). Ichave neapisina muganho skrini uye inozivikanwa notch iyo Apple iri kusanganisira muiyo iPhone X, ehe, iyo kurasikirwa kwescreen ine 3d Kubata, uye imwe chete yekumashure kamera, zvinogona kuita kuti mutengo wechigadzirwa ichi udzike. Zvinotova nerunyerekupe kuti anazvo chete 3GB ye RAM uchienzaniswa ne4GB iyo ichasanganisira iyo iPhone XI. Tichaona pane zvese izvi, zhizha rakazara nerunyerekupe rakatimirira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone SE » Iyi inogona kunge iri iyo yakaderera-mutengo iPhone SE iyo Apple yaizounza iyi 2018
Kudonha Shelter mugadziri akamhan'arira Westworld mutambo wekuvandudza Warner Bros
Amazon inotangisa yavo Amazon FreeTime Unlimited sevhisi yekuverenga kwevana paIOS